Uninzi lwabantu abasemakhaya bahlangene izolo kwinqanaba le-Stadium Live, apho kwakuqhutywe khona iqela lokubhiyozela umhla wokuzalwa we-TV "Imvula". Umcimbi osisigxina kumthendeleko kwakusebhendi "uMumiy Troll". Abahlali kuphela abantu abahlangene kwiholo, kodwa malunga nabalandeli abayi-8 000 beeseshini.
Intetho kaLilya Lagutenko iyavuya gqitha abo balapho, kuba umculi wenza zonke izinto zakhe ezindala - iVladivostok 2000, Medveditsa, Utekai. Kanye kunye neqela elidumile, abaphulaphuli bacula kunye namazwi eengoma.
Phakathi kwezi-guest-guests kwakuyiKsenia Sobchak no-Yana Rudkovskaya
UAlexey Navalny nomkakhe
Umhleli-oyintloko-mxholo weGlamor uMaria Fyodorova
Abasebenzisi be-Intanethi bagxeke iingubo ezidumileyo kwiqela elithi "Imvula"
Iindaba zakutsha malunga nokubhiyozelwa komhla wokuzalwa kweshishini leTV elibangelisayo lenze ingxoxo ecuthayo kwiwebhu. Abasebenzisi be-intanethi bagxeke ukubonakala kwabanye babantu abadumileyo abaye babonakala kwisiganeko somkhosi. Ngokukhethekileyo waya kuMaria Fedorova, ngubani umhleli oyintloko wephephancwadi ye-fashion Glamor.
Ngoko ke, umsebenzisi enegama lomnxeba strega1933 wabhala:
Ndandifuna ukuklolokra bonke abantu ababemele apha ... ngobuso obomvu, kodwa ndafika kwisithombe se-Masha Fedorova kwisigqoko sokugqotshwa nguye ngokusuka kumbhedlele kwaye yonke ingxabano yayiphelile.
"Abavakalisi" baphinde bahamba, kunye noKsenia Sobchak, bembiza ngokuthi "ingubo yepenguin."
Umsebenzisi Uphinda ucetyiswe ukuba ingubo yomlobi wezentatheli iphosa umqambi wayo:
O oothixo .... Ksyu kunye ne-sisyandry yakhe yeclown ngqo esuka entanyeni - yinto ehambelanayo ..... Lowo wayetyelela lo mdwebo waza wathatha i-ksyu - megATROL! Bravo!
Musa ukushiywa ngaphandle kunye no-Alex Navalny. Abasebenzisi bakhankanya iingxelo ezixhasayo ze-opposition:
... ukuvuvukala-ukuvuvukala kwi-jersey, i-reliefs eqinile. sisi, puzzo, ubukeka bubuhlungu - bubukeka buhle
Umculi uSlava wasebenza eMoscow kwiiyure ezimbalwa ezedlule, ividiyo
UVladimir Kristovsky wabonisa kuqala ubuso bakhe bonyana, ividiyo
U-Olga Buzova wayebhedlele esibhedlele, isithombe
Shish kebab kwi-oven kwisitya
I-Anesthesia ekuhanjisweni: ezomzimba, ezengqondo, zonyango
Ikhasi shish kebab ehovini
Bhaka ikhekhe elibizayo nelihle
Yintoni enokuyenza xa ungafuni ukulala ngesondo
Ukutya okutshisa iikhalori
Iibhokhwe zokutya: iimpawu zokupheka nokuzilungisa
Indlela yohlamba kakuhle inwele
Yintoni ongayibonisa ngoFebruwari 23, amadoda?
Indlela yokumisa isikhumba ngaphandle kokuhlinzwa